Ilali yeAce Age, dlala ngeI Ice Age | I-Androidsis
Mailen bravo | | Imidlalo ye-Android
IGameloft yazisa umdlalo omtsha we-android: Ilali yeAce Age, indibaniselwano yesicwangciso, ulawulo kunye nomdlalo wentlalo apho sinokuthi sincede abalinganiswa abaziwayo kwi-saga yefilimu ye-Ice Age ukwakha ilali yokuhlala zonke izilwanyana ezichaphazelekileyo.
Umdlalo omtsha we-Ice Age Village uphuma njengendlela yoku khuthaza imovie entsha ye-Ice Age, Ice Age 4: Ukusekwa kwamazwekazi, kwaye siza kubona abalinganiswa abatsha abazibandakanya neziyolo ezimnandi nezonwabisayo zikaDiego, uSid, uManny, uEllie kunye nommangaliso wesikwere uScrat osoloko eleqa i-acorn yakhe.
Umdlalo wokudlala we-Ice Age Village uphefumlelwe ngumdlalo ofanayo njenge-CityVille kunye neminye imidlalo efanayo kwinethiwekhi yoluntu, ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba inokudlalwa zombini ngokungqinelanisa kuFacebook nakwinethiwekhi ekhethekileyo yaseGameloft: iGameloft LIVE!
Njengoko ixesha lihamba, sinikwa imisebenzi emitsha esinokuyifeza ngokuqokelela izinto, ukwakha izakhiwo ezithile nokumema abahlobo bethu ukuba bathathe inxaxheba kuphuhliso lwesixeko sethu.
UGameloft uwukhuphe umdlalo ngo-Epreli 5 kwaye wathembisa ukuba uza kuba nohlaziyo oluninzi, kodwa kwasekuqaleni umdlalo sele unezinto ezaneleyo kubathandi boluhlu: kuvela abalinganiswa abatsha abavela kwifilimu, njengo-Sid's curmudgeonly ugogo, kunye neqela Izilwanyana ezibhabhayo ezilungele ukwenza ubomi bube nzima kumaqhawe ethu.
Ukuphuhliswa kweLali Age yeLali kusivumela ukuba sivule izilwanyana ezahlukeneyo, izinto, imihombiso kunye nolwakhiwo njengoko sihamba kwinqanaba elilandelayo. Ke, siya kuba nakho ukugcwalisa ilali yethu ngazo zonke iintlobo zezilwanyana ezahlukileyo, kwaye ke ngumcimbi wokulawula nokusebenzisa izixhobo ngokufanelekileyo ukuze bonke abemi bonwabe.
Umdlalo uyilo olunemibala egqamileyo, olulungele abantwana abancinci kodwa benesidanga esaneleyo sobunzima ekutsaleni ezona zifuna kakhulu. Kwinqanaba lomzobo, ineempawu ezinononophelo kunye noseto, kwaye oko kubonakala kwintsebenzo egqwesileyo yesindululo kwiifowuni zangoku, nangona kungekho mfuneko yokukhathazeka: Ice Age Village iyahambelana neenkqubo zokusebenza ze-Android 2.1 ukuya phambili.
Ukongeza kwi-gameplay yeklasi ye Isicwangciso kunye nolawulo, kuyakubakho imidlalo emincinci edlala iScrat apho i-squirrel enobuqhetseba kuya kufuneka yenze iindlela ezahlukileyo zokufumana i-acorn yakhe, kwelinye lawona maxesha amnandi kakhulu isaga ebenayo ukusukela oko yaqalwa.
Phambi kwenkulumbuso ngoJulayi 6 wefilimu yesine ye-Ice Age, uGameloft ubamba amalungelo esaga ukuba asungule umdlalo wevidiyo odibanisa impumelelo yesaga ngolunye lweentlobo ezaziwa kakhulu kwiifowuni eziphathwayo kunye nakumajelo asekuhlaleni.
La indalo yelali yakho Ngamaxesha e-Ice Age ifikelele kwiselfowuni yakho kwaye akufuneki uphoswe lithuba lokukhuphela mahala. Ubuncinci ngalo mzuzu, ukufikelela kwesi sicelo sigqwesileyo simahla, ke musa ukuchitha ixesha kwaye uqale ukudlala nokumema abahlobo bakho.
Ngokwam, Kwakumnandi kakhulu ukudibana kwakhona nabalinganiswa abathandekayo kwihlabathi le-cinema. UManny, uSid, uDiego no-Elly bakuncede ngeengcebiso ezahlukeneyo zokuqalisa ukwenza ilali yakho, kunye nemidlalo ye-Scrat mini efuna ingqalelo enkulu ukufumana amanqaku aphezulu. Ngumdlalo omnandi ngaphandle kwekhefu, apho siza kuhlala sizama ukufumana into okanye iqhekeza ukuqhubeka nokuqhubela phambili
Malunga nokuziphatha kwayo kwivenkile yokukhuphela, ukusuka kuyo Ikhutshwe ngo-Epreli 5, umdlalo sele uthatha ngaphezulu kwe-600.000 yokukhuphela. Ilali ye-Ice Age Village ikwinguqulelo yayo ye-1.0 ngoko ke inezinto ezininzi ezinokuyiguqula ukuze ibe yenye yeempumelelo ezintsha zeGameloft.
Iinkcukacha ezithe xaxe - I-Super Monkey Ball 2: I-sakura yoHlelo iyafumaneka kwi-Android
Khuphela - Ilali yeAce Age
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Ilali ye-Ice Age Village, amaqhawe e-Ice Age eza kwi-Android
Izimvo ezi-65, shiya ezakho
ULeandro tabeira sitsho
kaloku iyadika le midlalo eeee
Phendula uLeandro tabeira
romina brito sitsho
kuba lo mdlalo umnandi kakhulu
Phendula u-romina brito
Phendula u Guillermo360
Amakristali eCamarma sitsho
NdinguKristalex, nceda undongeze
Phendula kwiCamarma Crystals
AngelJavier FloresMena sitsho
oku kudubule kakuhle i-perron
Phendula u-AngelJavier FloresMena
Sele ndidlala lo mdlalo ubalaseleyo ngeselula yam, kodwa ukutyelela abamelwane undixelela ukuba kufuneka ndiwuhlaziye umdlalo. Kwenziwa njani? NCEDA
Molo, nam andazi, ndifuna uncedo nam
Ndifuna abamelwane njani
Kuhle kakhulu kodwa ndifumana njani i-beeellootaaaaas uncedo enkosi
UYesu Montes Zárate sitsho
AKAVUMELI NDIYEKE UKUBA NDITYELE ABOMAKHELWANE BAM OM KOMO UYAZIBEKA KWISEL:
Phendula Jesús Montes Zárate
ukuba uneentyatyambo jonga kuzo
Ndingawukhuphela njani lo mdlalo kwikhompyuter yam kuba ndiyidlala etafileni yam?
ukudlala i-kung fu skrat unokufumana ii-acorn okanye izilwanyana nkqu iingqekembe zethamsanqa
Akandivumeli ukuba ndindwendwele abamelwane bam, undixelela ukuba ndifuna uhlaziyo, ndenza njani?
Yesu, ngenxa yokuba unomsebenzi wokundwendwela abahlobo, emva koko ungene apho ukuze uwuzalisekise, yiyo loo nto, ukhetha umhlobo wakho
Ndiyawuthanda lo mdlalo
Umdlalo uyonwabisa kakhulu, andikwazi ukuwumisa kancinci, imibuliso
Phendula ku-Da Ndiya Go13
I-Villa yam ibizwa ngokuba yiVilla Monica, ndicela undonge njengommelwane emva koko ndiza kongeza, ndikhangele kuFacebook, igama lam ndinguMonica Corrales, kubonakala ngathi akukho mntu ungenayo i-MAC onokusongeza
molo ndixelele ukuba ndingakongeza njani kuba ndifumana ii-monicas corrales ezininzi
Ndiyayidlala kwiXperia X10, emva kwenqanaba lesi-7 iyeke ukusebenza, ndiyisebenzise kwaye iqala ukulayisha kodwa emva koko isicelo siyaphela kwaye asiqhubeki, kufuneka ndiyibuyisele kodwa ndiqala ku-0, inokuba yintoni? ?
kwenzeka into efanayo kum !! Ndine-HTC Wildfare S kwaye kwinqanaba elingu-7 okanye lesi-8 iyaphuma kwaye kufuneka ndiyikhuphe kwaye iqala ngo-0 XNUMX umntu oza kusinceda ngalo mba?
NGAMNYE NDINOMDLALO KODWA OKUNGENZEKI KUM NEBHOI KWINQANABA 17 AKUKHO OKWENZEKE KUM KWINQANABA 7 OKANYE 8
UJessica Guaran sitsho
Amii kwenzeka into efanayo kum, ndiza kwinqanaba le-18 namhlanje ndizamile ukudlala kodwa andikwazi ukungena kumdlalo, ndiyeke: C: C
Phendula ujessica guaran
Ndingayidlala njani ku-facebook?
Choclet Negritobimbo2 sitsho
Ndingathanda ukwazi ukuba ndiyidlala kanjani ebusweni
Phendula kwiCroclet Negritobimbo2
Awunakho ukudlala kwiselfowuni
Ungandongeza ndinguGafyLiz19 kwi-gameloft… ndiyawuthanda umdlalo .. !!!!! Ndikumanqanaba 24
Ngaba uyazi ukuba ungalandela njani ilali?
Ndongeze, ndingu renac508. Xa bendongeza ndiyabadibanisa ndibanike ii-acorn, yile ndlela ndiyaziyo ukuza kuthi ga ngoku. lo mdlalo uyakhobokisa, uninzi !!!
Ngowona mdlalo ubalaseleyo endakha ndawudlala ebomini bam!
uninzi .. kodwa ndifuna abamelwane abaninzi !!! ndongeze..igameloft yam ilapioji !!!! ukwanga !!! Ndifuna abamelwane baseArgentina !!!
Ndidlala ngomthala wesamsum kodwa okwenzekayo kukuba andazi ukuba ndingumlandeli womhlobo njani, ngaba umntu othile angandinceda kumdlalo welali yeqhwa ???
Uxolo nothando sitsho
Ndingathini ukulandela ilali yomhlobo wam? ndincede impumlo: s
Phendula kuXolo noLuthando
Ndincede nceda njengoko ndiba ngumlandeli welali yomhlobooooooo ngaphandle kwalonto andinako ukuya phambili
Molo, uyazi ukuba ungandixelela njani?
Khange ndizame konke kwaye akukho mntu undixelela ukuba njani
ukusuka kwigameloft ??? okanye abahlobo batyelele ilali ?? Ukuba sowuyayazi indlela yokwenza i-gameloft yam yi-lapioji kwaye ukuba awundixeleli eyakho kwaye ndiza kongeza! Ukwanga!
Iiluffuffs zelali enomkhenkce
Molo ndongeza, i-gameloft yam yi-paulandrearc kwaye ilali yam ibizwa ngokuba yi-chakalak
yenza izihlobo nje kwiilali ezahlukeneyo kwaye ucofe iintliziyo
Ndiqala ngaphi ukulandela ilali ??? Ndijonga yonke indawo kwaye andiboni ukuba ndingayenza njani! Kwaye akukho mntu uthi cm !! Ukuba unganceda ... Enkosi !!!! Yongeza i-TWIN ICE VILLAGE… okanye ebusweni cm: MUCHO GUSTO ANDREY….
Molo ungandongeza, kuba ndifuna abahlobo ukuze ndiqhubeke, ndingu-ice, usana, iPorfis
Ndingaba ngumlandeli weelali zabahlobo bam njani?
Ndimlandela njani umhlobo wam? Sele ndineelali ezininzi ezinobubele, kodwa andikwazi "ukuzilandela" ngubani owaziyo!
Ndiyawuthanda umdlalo undongeze njengomhlobo ukuba ndithumele kwaye ndifumane ii-acorn ………. Cboston2k
Ndilandele kwaye ndiyakulandela laurita lop
Nceda ungeze i-nikkoklein
Ndandinenkxalabo efanayo njengabaninzi kwaye yayiyindlela yokongeza izihlobo apha ndicacisa!
Kuqala uye kukhetho lwabahlobo, ezantsi ngasekunene, ulapho ke umxelele ukuba atyelele ezinye iidolophana, ukuba awunayo, kwaye ufumana umyalezo kwilali nganye entsha ukongeza abahlobo kwaye umnike ikliphu kuyo, emva kokuba ungeze yonke into Umdlalo ekuvumela ukuba uqaphele amagama onawo apho njengezihlobo kwaye uye kukhetho lokumema abahlobo kwaye apho ukhetha ukuba ngaba yi-gameloft, njengakwimeko yam. (kodwa ngaphambili kuya kufuneka ubhalise kwi-gamelof, kwaye apho ukhetha abahlobo kwaye wongeza igama! icacile njengoko ndingacacisa.
UMartina Salgado Ventura sitsho
Akukho nto yenzekayo kum HAHAHA Ndiyidlala kwithebhulethi ye-ASUS kwaye yeyona ilungileyo! Ndiya kwinqanaba 30 !!
Phendula uMartina Salgado Ventura
Molweni bafana, ndongezeni kwaye ndiza kuninika izipho, igama lam kwi-gameloft yi-cambaeid, imibuliso ...
Lo mdlalo uyonwabisa kakhulu, ndikwinqanaba lama-22… ndongeze, ndingu-thelmamita_86
Mailen bravo sitsho
Ukuba i-thelmamita, ngumdlalo omnandi kakhulu kwaye abalinganiswa kwiimuvi baboniswe kakuhle. Omnye umdlalo ofanayo nolunge kakhulu yi-Ocean Tower - https://www.androidsis.com/ocean-tower-construye-tu-propio-rascacielos-en-android/ - jonga 🙂
Phendula kuMailen Bravo
I-constanza sanchez nuñez sitsho
Ndiyawuthanda umdlalo endiwudlalayo yonke imihla kwitafile yam kwaye andize ndiyeke !!!!
Phendula kwi-constanza sanchez nuñez
Ndikhenkcelelwe iintsuku ezimbini …… Ndiqhubeka njani nokudlala kwi-ipad?
Yongeza i-Joaco_2006 ukundilandela, ilali yam ibizwa ngokuba lilali kaJoaco. Enkosi!!!
EEcalderon ndongeze nceda Salu2 ..
Njengokuba ndingumlandeli wabamelwane bam, iyasinceda into yethu .. Bongeza isiqithi sam kuthiwa yiConstance kwaye i-gamelof yiConstance
Yongeza MEEE mgomezsimon kwi-GL… ENKOSI !!!
intle intle 2905 sitsho
Umntu undixelele ukuba ndiwufaka njani umdlalo esele ndihambile kwaye andinakukwazi ukufaka kwakhona
Phendula linda mhle 2905
Andikwazi ukuvula umdlalo wam ukusukela nge-7 kaMeyi andazi ukuba ndenze ntoni ndiyayithanda ilali yam kunye nokuqokelelwa kwexesha lam lomkhenkce ndicela undixelele ukuba mandithini normalini007@gmail.com bulela!
Molo, umdlalo wam ucinyiwe, ndiyibuyisile kwaye andinakukwazi ukufikelela kuba ndibonakala ndixhumekile, umntu angandixelela ukuba kutheni
queeeeeee kuhle lo mdlalo wexesha lomkhenkce ndincoma lona
UJuan Carlos Gonzalez Barboza sitsho
ungandongeza kwi-fas igama lam ndingu-choco ice pino
Phendula u-juan carlos gonzalez barboza
ANDINAKUKUVULA I-MAILBOX. Nabani na owaziyo inyama yehagu ??
Ndilolunye UNCEDO !!!
Iyandibhloka kwaye ndiyakwazi ukuyilayisha, lixesha lesithathu ndiyifaka, kuba into enye ihlala isenzeka kwaye sele ndinendawo enkulu yokuhlala, ndifuna ukuyilahla kwakhona.
I-Hacker ipapasha iGoogle Play ngaphandle kokhuseleko lwengingqi.